UEFA oo sharci isku mid ah ka bedeshay Final-ka Champions League iyo midka Europa League – Gool FM
(Yurub) 20 Maajo 2019. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa hal sharci oo isku ah ka bedelay Final-ka Champions League oo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Tottenham iyo Liverpool & Midka Europa League oo ay wada dheeli doonaan kooxaha reer London ee Chelsea iyo Arsenal.
Koox kasta oo ka mid ah Liverpool iyo Tottenham waxa ay ku dhawaaqi doontaa 23-ka ciyaaryahan ee ay kala qeyb geli doonaan kulanka Final-ka Champions League oo labada kooxood ee ka dhisan Premier League ay ku wada dheeli doonaan caasimadda Spain ee Madrid, 01 bisha June ee soo aaddan.
Reds waxa ay doonaysaa inay ka soo kabato guuldarradii xilli ciyaareedkii hore ka soo gaartay Final-ka Champions League naadiga Real Madrid, halka Spurs ay rabto inay markeedii ugu horreysay hanato tartankan.
Dhinaca kale kooxaha reer London ee Chelsea iyo Arsenal ayaa wada dheeli doona Final-ka Europa League kulankaasoo dhammaadka bishan ka dhici doona Magaalada Baku.
UEFA ayaa hal sharci oo isku mid ah ka bedeshay Final-lada labadaan tartan ee Champions League iyo Europa League.
Sharcigan cusub ee ka dhaqan geli doona Final-ka Champions League iyo midka Europa League ayaa kooxaha u ogolaanaya inay kursiga keydka u soo fariistaan 12 ciyaaryahan.
Laga soo bilaabo wareegga Guruubyada Champions League illaa labadii lugood oo afar dhammaadka tartankan, kooxaha waxaa loo ogolaa inay kursiga keydka u soo fariistaan todobo ciyaaryahan oo bedel ah, laakiin tiradaas waxa ay Final-ka ka dhacaya Madrid noqonaysaa 12 ciyaaryahan.
Tababaraha Liverpool ee Klopp iyo midka Tottenham ee Maurico Pochettino ayaa la filayaa inay kursiga keydka kulanka kama dambeysta ah ee koobka horyaallada Yurub soo fariisiyaan xiddigo da’yar oo dhowr ah.
Dhinaca kale UEFA ayaa xaqiijisay in macallimiinta markale loo ogolaan doono inay bedel dheeri ah sameeyaan haddii la isla aado waqtiga dheeri ah, waxaana ay middaasi wadarta guud ee bedellada ka dhigaysa afar bedel.